Qurxinta 'Jinfuya' waxaa si sharaf leh loogu aasaasay kuna koray Magaalada Malaa'igta. Waa nooc cusub oo isbeddel qurux leh oo qurux leh oo ku siin kara qurxinta ugu fiican ee aan xoolaha lahayn. Waxaan dan ka leenahay awood u lahaanshaha iyo ka mid noqoshada, waxaanan ku dhiirigelinaynaa bulshadayada quruxda jecel inay isku duubnaadaan iskuna dayaan qurxinta. Anaga...
Hooska indhuhu waa wax la isku qurxiyo oo lagu mariyo baalasha indhaha iyo sunnayaasha hoostooda. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in indhaha qofka xiran uu ka soo muuqdo ama u ekaado mid soo jiidasho leh. Hooska indhuhu wuxuu qofka ku daraa qoto dheer iyo cabbir, wuxuu buuxiyaa midabka indhaha, ama wuxuu si fudud indhaha ugu jeediyaa indhaha. Indho sh ...
Sidee loo doortaa dheecaanka aasaasiga ah ee ugu fiican?
Aasaaskayaga ugu iibinta badan ee iibiya ayaa hadda ku jira 40 hoos! Qaaciddada fudud, caanaha aan saliidda lahayn ayaa si dabiici ah ugu milma maqaarka dhammaystirka nus-dhamaadka quruxda badan ee soconaya maalinta oo dhan. Qaaciddada dareeraha ahi waxay gacan ka geysataa soo celinta maqaarka maqaarka oo aan sinnayn iyo codadka maqaarka muuqda. Ku habboon dhammaan noocyada maqaarka iyo t ...
Sidee loo dhammeeyaa Horumarka Qurxinta
Dhanka qurxinta, wajiga oo la xoqo waa inuu noqdaa amarkaaga ugu horeeya ee ganacsiga kahor intaadan usii gudbin bishimahaaga qurxinta iyo indhaha. Laakiin arrimuhu way sii murgi karaan. Runtii ma u baahan tahay wax aasaasi ah? Qarsoomahu ma imaadaa ka hor ama ka dib aasaaska? Waxaan halkaan u nimid inaan ka qaadno mala-awaalka meesha aan ...